Kulesi sihloko sizokwazisa emsebenzini "Gooseberries" nguChekhov. U-Anton Pavlovich, njengoba cishe usuvele wazi, ungumlobi waseRussia, umdlali wezokudlala. Iminyaka yokuphila kwakhe - 1860-1904. Sizochaza isifinyeto sale ndaba, siyihlaziye. "I-Gooseberries" uChekhov wabhala ngo-1898, okungukuthi, esikhathini esiphezulu somsebenzi wakhe.
Abstract: Ukuqala kwendaba
UBurkin no-Ivan Ivanych Chimsh-Himalayan bahamba phambili. Umzana waseMironositskoe ubonakala kude. Ngokungazelelwe kuqala ukuwa, ngakho-ke banquma ukuya kuPavel Konstantinych Alekhin, umngane womninikazi ogama lakhe elisemapulazini aseSofino, eliseduze. U-Alyokhin uchazwa njengomuntu omude oneminyaka engaba ngu-40, egcwele, ebuka ngaphezulu njengomculi noma uprofesa kunomnikazi wendawo, enezinwele ezinde. Uhlangana nabahambi emgodini. Ubuso bomuntu bubumnyama ngothuli, izingubo zakhe zingcolile. Uyathokozisa izivakashi ezingalindelekile, uphakamisa ukuthi baya endaweni yokugeza. Emva kokugqoka nokugeza, uBurkin, u-Ivan Ivanych Chimsh-Himalayan no-Alekhine baya endlini lapho u-Ivan Ivanych etshela indaba kaNikolai Ivanovich, umfowabo, phezu kwetiyi ngejamu.
U-Ivan Ivanych uqala indaba yakhe
Abazalwane abasebuntwaneni bachitha endaweni kababa, inkululeko. Abazali babo bevela kuma-cantonists, kodwa bashiya izingane zabo njengezikhulu, njengoba bekhonza isikhundla sesiphathimandla. Ifa ngemuva kokufa kwakhe lithathwe emndenini ngezinkokhelo. Kusukela eneminyaka engu-9 ubudala, u-Nikolai wayehlezi ngemuva kwamaphepha egumbini likahulumeni, kodwa wayesekhaya kabi futhi ephupha ngokuthenga indawo encane. U-Ivan Ivanych akazange amzwele ngesifiso sesihlobo sakhe sokuphila ukuzibophezela kule ndawo. Futhi uNikola akakwazanga ukucabanga nganoma yini enye, ngesikhathi sonke emele umasipala omkhulu, lapho kwakudingeka ukwandise i-gooseberries.
U-Nikolai Ivanovich uhlanganisa iphupho lakhe empeleni
Umfowabo ka-Ivan Ivanych wathenga imali, wayengenasondlo, futhi ekugcineni akazange ashade ngothando ngomfelokazi ocebile. Wabeka umkakhe u-half-hungry, futhi wamfaka imali egameni lakhe ebhange. Oshade naye akazange abhekane nalokhu kuphila futhi washona ngokushesha, futhi uNikolay, engaphenduki, wazithengela indawo eyayifunayo, watshala izihlahla ezingu-20 ze-gooseberries futhi waphulukiswa ngokuzijabulisa kwakhe njengomnikazi wendawo.
U-Ivan Ivanych uvakashela umfowabo
Siyaqhubeka nokuchaza indaba eyenziwa yi-Chekhov, "i-Gooseberries." Isifinyeto esifushane sezenzakalo ezilandelayo kanje. Lapho uNikolai efika ukuyobona u-Ivan Ivanych, wamangazwa ukuthi umfowabo wayewile kangakanani, flabby futhi endala. Le nkosi yaba yindlovukazi yangempela, idla kakhulu, yahlala iphikisana namafektri futhi yakhuluma ngezwi likaNgqongqoshe. U-Ivan Nikolayevich waphatha u-Ivan Nikolayevich nge-ugqumugqumu, futhi kwacaca kuye ukuthi wayenelisekile ngesiphetho sakhe kanye naye.
U-Ivan Ivanych ubonisa injabulo nenjongo yokuphila
Lezi zenzakalo ezilandelayo zisinika indaba ethi "Gooseberries" (Chekhov). Umfowabo kaNicholas, lapho ebona isihlobo sakhe, wabanjwa ngomuzwa ophelelwe ithemba. Wabonakalisa, emva kokuchitha ubusuku efa, cishe bangaki abantu emhlabeni abahamba ngobuqili, behlupheka, baphuza, bangaki abantwana abafa ngenxa yokungondleki. Futhi abanye okwamanje baphila ngokujabula, balala ebusuku, badle emini, bathi bangenalutho. U-Ivanych wacabanga ukuthi ngemuva komnyango womuntu ojabulayo kumele kube nomuntu onesando futhi ugqoke ukumkhumbuza ukuthi kukhona abantu abampofu emhlabathini ukuthi ngelinye ilanga ingozi izokwenzeka kuye futhi akekho ozokuzwa noma ambone, njengamanje Manje akazwa futhi akaqapheli abanye.
Ukuqedela le ndaba, u-Ivan Ivanych uthi akukho injabulo, futhi uma kunenjongo ekuphileni, akakho kulo, kodwa ukwenza okuhle emhlabeni.
U-Alyokhin noBurkin bathatha kanjani indaba?
Akunabo u-Alyokhin, noma uBurkin abakwaneliswa yile ndaba. U-Alyokhin akaqondi ukuthi amazwi ka-Ivan Ivanych aqinisile, ngoba kwakungekho mayelana nezinhlanzi, hhayi nge-croup, kodwa ngezinto ezingenalo ubudlelwane obuqondile empilweni yakhe. Noma kunjalo, ujabula kakhulu nezivakashi futhi ufuna ukuba baqhubekele ingxoxo. Kodwa isikhathi sesivele sephuzile, izivakashi nomnikazi bazolala.
"Gooseberries" emisebenzini yaseChekhov
Ngokwezinga elikhulu, umsebenzi ka-Anton Pavlovich unikezelwe "kubantu abancane" nokuphila. Indaba ukuthi uChakhov wadala, "I-Gooseberries" ngothando ayitsheli. Kulo, njengamanye eminye imisebenzi eminingi yalowo mbhali, abantu nomphakathi bavezwa ku-philistinism, ubuhlungu nokuhlambalaza.
Ngo-1898, indaba ethi "Gooseberries" iChekhov yazalwa. Kumele kuqashelwe ukuthi isikhathi lapho umsebenzi wadalwa khona yisikhathi sokubusa kukaNicholas II, owaqhubeka nenqubomgomo kayise, engafuni ukufeza izinguquko ezivulekile ngaleso sikhathi.
Izimpawu zikaNikolai Ivanovich
UChekhov uchaza kithi Chimsh-Himalayan - isikhulu esisebenza esigodini esisodwa namaphupho okuba nefa lakhe. Isifiso esiyigugu sale ndoda ukuba umninikhaya.
Ugcizelela uKokhov ukuthi kude kangakanani nalesi sikhathi lo mlingiswa, ngoba ngesikhathi esichazwe, abantu abazange balandele isihloko esingenasici, izinduna ezinkulu zaziphupha ukuba zihlonipheke, zibhekwa njengezifashini, zithuthukile.
I-hero ka-Anton Pavlovich inenzuzo ngokushada, ngemva kwalokho ithatha imali ayidinga kumkayo futhi ekugcineni ithola indawo efunwayo. Omunye wamaphupho akhe udlalwa yiqhawe, ukutshala i-gooseberries kule ndawo. Futhi umkakhe, okwamanje, ubulawa yindlala ...
"I-Gooseberries" i-Chekhov yakhiwe ngokusebenzisa "indaba endabeni" - ukwamukela okukhethekile kokubhala. Sifunda umlando womnikazi womhlaba kusuka ezindebeni zomfowabo. Kodwa-ke, amehlo ka-Ivan Ivanovich amehlo omlobi ngokwakhe, ngaleyo ndlela ubonisa umfundi ukuthi uyabheka kanjani abantu abanjengoChimsh-Himalayan.
Isimo sengqondo kumfowabo ka-Ivan Ivanovich
Umfowabo we-protagonist endabeni ethi "Gooseberries" Chekhov ibhekene nobumpofu obungokomoya bukaNikolai Ivanovich, esaba kakhulu ngenxa yokungazi kahle kwakhe nokwehluleka kwesihlobo sakhe, futhi iphupho elinjalo nokugcwaliseka kwalo kubonakala sengathi lo muntu uyinhloko yobuvila nobugovu.
Phakathi nesikhathi esichitha kule ndawo, u-Nikolai Ivanovich ukhula okhulile futhi omdala, uyaziqhenya ngokuba ngumuntu wezicukuthwane, hhayi ukuqonda ngesikhathi esifanayo ukuthi le ndawo isivele ishonele, futhi ifomu lokuphila elihle nelingenayo liza esikhundleni sayo, futhi kancane kancane izisekelo zenhlalo ziyashintsha.
Kodwa-ke, iningi lomlandeli lihlatshwa umzuzu lapho uNikolai Ivanovich enikezwa khona isivuno sokuqala se-gooseberries. Ngokushesha uyakhohlwa ngezinto ezifashini zesikhathi nokubaluleka kwabahlonishwayo. Lo mninikhaya uthola inkolelo yenjabulo ngobumnandi be-gooseberries, uthola isizathu sokubonga futhi ujabule, futhi lesi simo simangaza u-Ivan Ivanovich, ocabanga ukuthi abantu bakhetha ukukhohliswa ngokwabo, nje ukukholelwa ekuziphatheni kwabo siqu. Uzigxeka futhi, ekutholeni amaphutha anjalo njengesifiso sokufundisa nokwaneliseka.
U-Ivan Ivanovich ucabanga ngesimo sokuziphatha nokuziphatha komuntu ngamunye nomphakathi, isimo sakhe sokuziphatha somphakathi wanamuhla siyamkhathaza.
U-Ivan Ivanovich ukhuluma ngendlela ahlukunyezwa ngayo isicupho, esenziwe ngabantu, futhi ucela ukwakha esikhathini esizayo kuphela okuhle futhi uzame ukuqeda ububi. Kodwa empeleni, ngokusebenzisa umlingiswa wakhe uChekhov uqobo ngokwakhe uthi. Umuntu ("Gooseberries" uqondiswa ngamunye wethu!) Kumelwe uqonde ukuthi umgomo empilweni yizenzo ezinhle, hhayi umqondo wenjabulo. Ngokusho komlobi, wonke umuntu ophumelelayo kufanele abe "nendoda enesando" emi ngemuva komnyango, amkhumbuze ukuthi kubalulekile ukwenza okuhle - ukusiza izintandane, abafelokazi, abahluphekile. Phela, ngelinye ilanga ingozi ingenzeka ngisho nangomuntu ocebile kakhulu.
Danila Dunaev: Biography, umndeni
Ukuqunjelwa e ingane: enye indlela ngaphandle inkinga
Wedding garter yezandla bakamakoti siqu
4 izizathu zokuthi kungani kufanele ususe igama elithi "thethelela" kusukela silulumagama yakho